I-Raw Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrate powder (i-1224690-84-9) - i-Phcoker
Oktobha 30, 2018
Tianeptine Sulfate, ebizwa ngokuba yiRaw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder, i ......
I-Raw Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrate powder (i-1224690-84-9) ividiyo
I-Raw Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrate powder (i-1224690-84-9) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Raw Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrate powder
Igama leKhemikhali Tianeptine hemisulfate monohydrate; 1224690-84-9; Heptanoic acid,
uhlobo Numama Stablon, Coaxil
Iqela leziyobisi AbaPhakathi kunye neeKhemikhali ezintle
Inani leCAS 1224690-84-9
I molecular Fi-ormula C42H56Cl2N4O14S3
I molecular WSibhozo 1008.004 g / mol
IMasaisotopic Mass 1006.233 g / mol
Ukuxuba Point 1800 ℃
Ukubilisa Point 269.8 ° C kwi-760 mmHg
umbala Umoya oMhlophe
Sukufaneleka I-Freetly soluble Emanzini kunye ne-methanol ne-dichloromethane
Sisibetho Tukushisa Indawo eyomileyo
Aukuguquka I-tianeptine sodium ingasetyenziselwa kwi-Tricyclic isakhi kunye ne-psychostimulant
I-tianeptine sodium inomsebenzi wokulwa nesilonda kunye neepropati ezichasayo. Ukuxhatshazwa
I-Raw Tianeptine i-hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
I-Raw Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrate powder, ebizwa nangokuthi iTianeptine Sulfate, yinguqu ephucukileyo yefayili ye-tianeptine yetyuwa ye-sodium. Akusiyo i-hygroscopic, kulula ukuyisebenzisa, ihla ilula, kwaye ihlala kabini ngokude. Inayo yonke inzuzo efana ne-Tianeptine Sodium, ifomu le-sulphate kuphela linomlinganiselo wobomi beeyure ze-5-6, ngoko lihlala kabini kwixesha le-soane. Ngenxa yoko, abaphandi baya kufuna ii-2-3 ngamaxesha e-sulfate ukuphumeza iziphumo ezifunwayo eziye zithandwa kwi-sodium. I-Sulfate nayo iphantsi kancinci kwisibini kunye ne-viscosity.
I-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate ibalwa njengendlela yokukhetha i-serotonin yokuvuselela i-serotonake (SSRE) esetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo. I-Tianeptine yaphuhliswa eFransi kwi-1960 kwaye isetyenziswe kuyo yonke indawo yokugqibela ye-2000s.
Kwakhona ngamanye amaxesha kusetyenziswa ukunyanga isifo sengqondo sesifo sengqondo okanye i-asthma. Kwizilingo ezinzima zichazwe ukuvelisa iziphumo zokuzonwabisa ezinjenge-opioid ezinjenge-sedation kunye nokuvuselela, ukuphucula ukukhuthazwa, kunye nokuzonwabisa xa kulawulwa.
Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9) Indlela yokusebenza
Enye yeendlela zokuqala ze-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate kukunyusa i-serotonin (i-5-HT) kwi-brain and platelets. Ngokungafani nemicimbi ye-tricyclic, i-Tianeptine ayibonakali ihambelana nokunciphisa ukusebenza kwengcamango okanye umsebenzi wemoto. Kubonakala kunomsebenzi kwi-glutamatergic system, echithwa ukuba yindlela entsha yokuxhatshazwayo.
Ngokwandisa i-serotonin, i-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate ineendlela ezichaseneyo kwi-SSRI yamasiko. Izifundo zakutsha zihlolisise imiphumo ye Tianeptine kwisakhelo se-neuroplasticity hypothesis yokudakumba, apho kunokuthi kube nento ethile. Uphando olutsha lubonisa ukuba iTianeptine inokusebenzisana ne-adenosine A1 receptors.
Ngaphezulu, uphando olutsha lupapashwe kwi-2014 lubonisa ukuba iTianeptine inokusebenza njenge-m-opioid receptor (MOR) agonist. Abaphandi basebenzisa ii-radioligand ezizibophelelayo kunye nezilingo zokusebenza ezisetyenziselwa i-Tianeptine njenge-agonist esebenzayo ye-MOR. Kwakhona i-agonist epheleleyo ye-opioid kodwa ngobudlelwane obuphantsi kakhulu. I-tianeptine yayingenakusebenza kwiindawo ze-k-opioid receptor.
ukusebenzisa I-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
▪ Ukuphazamiseka kwengxaki
▪ Iinkxalabo zokuxhatshazwa kunye neengxaki zokuxhatshazwa kunye neenotropic
▪ Ukusebenza kwengqondo kunye nokukwazi ukuphucula ukufunda
▪ Intlungu yesisu
Iphakanyiswe i-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9) Isisombululo
I-Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrat dosage i-25 mg kanye, okanye kabini ngosuku. Nokuba xa uqala nge-dositi ephantsi, kukulungele ukuwukhawulela kwi-2 okanye kwi-3 iintsuku ngeveki ubuncinane ngeentsuku ze-3 - 4 phakathi.
I-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate ivela kwifomsule okanye kwifom powder. Kunconywa ukuba uqale ngesilinganiso esezantsi kwaye ukwandiswe ngamanani amancinci de ufikelele kwisilinganiso esifanelekileyo. Ukongezelela, amanani amancinci amanciphisa ubuchule bokulutha, ukuhoxisa ngokugqithiseleyo kunye nokunyamezela.
Imilinganiselo ye50 - 75 mg ingakhuthaza. I-Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrates dose yokuzonwabisa> 100 mg ingenza i-Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrates high sensation.
Izinzuzo ze Tianeptine i-hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
♦ I-Tianeptine hemisulfate monohydrate ithuthukisa ubuchopho be-brain neuroplasticity kwaye iyanciphisa ukudandatheka. I-neuroplasticity isakhono sobuchopho ukuvumelanisa nokutshintsha xa ufunda; negalelo ekusebenzeni okungcono kwengqiqo kunye nokuphucula ulwazi lokufunda.
♦ Ukufunda ngezigulane ze-90 ezine-PTSD kubonise iziphumo ezintle ngokusetyenziswa kwe-Tianeptine hemisulfate monohydrate. Uphando luye lwabonisa ukuba ngonyango nge-tianeptine sulfate kunye nokunciphisa okukhulu ukuphazamiseka kwengxaki. I-tianeptine i-hemisulfate monohydrate enikezelwa kwizigulane ezigugile ibonise ukuphucula umxhelo we-neurocognitive kunye nokuphuculiswa kwemizwelo.
♦ Izifundo zezilwanyana kunye noluntu ziye zenziwa ekwenzeni unyango lwe-Parkinson kunye ne-tianeptine hemisulfate monohydrate, ebonisa iziphumo ezithembisayo ekuphuculeni amanqaku empilo yengqondo.
♦ Ukufundwa kwangaphambili kwezigulane ze-68 nge-ADHD iphetha ukuba amanqaku athile aphuculwe kakhulu kwaye i-Tianeptine hemisulfate i-monohydrate inenzuzo ekunikeni amandla okuqwalasela okungcono kunye nokunciphisa ukuziphatha okubi.
♦ I-tianeptine i-hemisulfate monohydrate nayo i-analgesic (i-painkiller) esebenza kakuhle, kubantu abajongene nobuhlungu obungapheliyo. Yindlela efanelekileyo yokulondoloza iimpawu ezinxulumene neengxaki zempilo yamathumbu.
♦ I-Institute of Medicine yezoLimo eKaracas yenze isilingo se-52 seveki ebantwini abane-asthma. Izigulane ezilawulwa yi-Tianeptine hemisulfate monohydrate kubonise ukwanda okukhulu komsebenzi wamaphaphu.
♦ Nangona uphando oluninzi lufunekayo, ukufundwa kwabasilisa be-237 abane-ED baqikelele ukuba i-tianeptine ingaba unyango osebenzayo.
♦ Iziphumo ze-Tianeptine ze-anxiolytic azichaphazeli kakubi umsebenzi we-acetylcholine okanye umsebenzi we-cardiovascular, okwenza i-tianeptine ibe yindlela enhle kakhulu kubantu abadala kunye nabanye